Muva nje, i-World Wide Web iba indawo ukuqashwa kwabantu abaningi abahola imali ngokugcwalisa okuqukethwe amasayithi, ibhulogi ukukhuthazwa kanye kudalwa iziteshi ku-YouTube - service enikezela isiqophi ibamba. Isiteshi ethandwa kakhulu ku-YouTube iyenza kanjani imali ku ukukhangisa kokuqukethwe, uhlelo oluhlangene, futhi isibalo ababhalisile. Ukuba intandokazi site videobloggerov, i-YouTube ikunikeza ithuba uthole tibalo fabulous kumavidiyo yasekuqaleni ezithakazelisa umphakathi.
abantu abanamakhono, yebo, kungukuthi uyasala futhi osungulwe iziteshi ngezihloko ezahlukene kanye izitayela, okuyinto baye makwaziwe yibo abadali futhi waletha imali engenayo eside.
Sethula Blogger zethu phezulu emihlanu ethandwa - inkanyezi isiqophi ibamba-YouTube.
UNatalie Tran - blogger kunazo owaziwa, ukusakaza imibukiso zabo e-Australia ngaphansi kwegama communitychannel, kuvula isilinganiso "Iziteshi athandwa kakhulu ku-YouTube». ukulanda njalo amahlaya imidwebo, yena uhola ama-dollar ayinkulungwane 100 ngonyaka. kulingisa zalo ezinhle, esebenza, umuzwa olukhulu amahlaya sasimthanda izigidi ababukeli emhlabeni wonke bese udvweba kusiteshi yayo kakhudlwana futhi ababhalisile abaningi. Ukubukwa imidwebo Natalie Tran ukufinyelela 140 million.
Esinye isiteshi adume kakhulu ku-YouTube - Lucas Kryukshanka isiqophi ebonisa ukuthi usebenzisa camcorder umama ubeka amavidiyo ezihlekisayo, lapho udlala indima yokuba engenabantu ingane ngonyaka eyisithupha Fred, ukhuluma ngezwi okuhambisanayo. Lucas ithalente kanye umqondo yakhe ekhaliphile ukuze babe sebekhonze njengamaphayona umqondo ifilimu "Fred Shaw," okuyinto owawusakazwa futhi laxhaswa isiteshi Nickelodeon. Comedy chungechunge lubonisa ukuzidela umfana oneminyaka engu-16 ubudala, uvele ku izimo engenangqondo kanye ezisicasulayo. Lucas Kryukshank njengemuntfu losemusha kanye US Blogger uhola kusiteshi zalo ezingaphezu kuka-140 eziyinkulungwane zamaRandi ngonyaka. Inani eliphelele lokubukwa kwamavidiyo akhe afinyelela ababukeli kwezigidi ezingu anamakhulu mabini.
Max kanye + 100 500
Ngokuqondene videobloggerov Russian - nabo abazange zisale ngemuva kwesibalo yutubovtsev angaphandle ethandwa. Isiteshi ethandwa kakhulu eRussia-YouTube - ezihlekisayo ukuzijabulisa show Max isetshenziswa njengoba kwenkundla embozwe ukuphrinta ngwe yaseBengal. isiRashiya isiteshi ukushelela inhlamba, nokho, intsha eyaziwa - base Max zokubhalisa ifinyelela irekhodi amadijithi million kuthi ukubukwa kwevidiyo yayo angajwayelekile idlula ayizigidi ezingu-600! Zuza UMBHALI umethuli we ezinamasondo ngokukhuluma nokuklolodelwa funny videos, okuyinto ayinala kuleli Inthanethi. Inani engenayo yakhe ayizange wakwambula, kodwa ngokuvumelana idatha eseduze kuhluka 10 kuya kwezingu-30 zamaRandi ngenyanga.
Blogger omncane engenathi Infamous Runet - Roma Acorn oneminyaka engu-18 ubudala futhi ngomzila wakhe RomaAcorn-YouTube uyawuthanda ukuthandwa ububanzi phakathi izilaleli yobusha. Kuyi-Internet, uvame ukubizwa ngokuthi 'Russian Justin Bieber. " Bonisa Acorn - ngokuyinhloko izinsalela ukuphila kwakhe futhi kuhambeke kalula uhlobo imibukiso sewebhu. Inani eliphelele lokubukwa kwamavidiyo yakhe lidlule kwezigidi ezingu-80, isibalo ababhalisile safinyelela 700.000. Ukuthandwa ebanzi Roma futhi indlela obukeka zako ezikhangayo, nakuba impumelelo le nsizwa kuletha izinkinga eziningi - the isithelo izikhathi eziningana eshaywa futhi ngokuthi nomele kobungqingili. Income Roma Acorn okwamanje simi ku ezingaphezu kweyodwa dollar ayinkulungwane ngenyanga.
I umlutha Pavlik
Ucedzela isigaba "Kuhle-YouTube TV» isiteshi engengaphansi ethandwa uPawulu Radontseva kusukela Samara. Imiqophi Pavlik Addict ukuchaza izindaba ezihlekisayo nokuphila intsha, zihlanganisa imidwebo kokusetshenziswa kwezidakamizwa, usebenzisa inhlamba. Naphezu kunalokho flat amahlaya acinene izwi protagonist, siteshi kungenziwa ukuziqhayisa wezigidigidi dollar ukubuka, ababhalisile ibutho.
Isiteshi adume kakhulu ku-YouTube - akuyona ahlekisayo imidwebo nje, kodwa futhi amavidiyo ulwazi mayelana sphere ezihlukahlukene zokuphila. Futhi ufinyelele izigidi ukubukwa kanti ababhali zabo zithola imali enhle.
Paris Ebusuku - idolobha ohluke ngokuphelele!
Maykl Shin: Biography futhi Filmography umlingisi. amaqiniso ethakazelisayo
Indlela yokwenza isicupho zabuya izimbungulu ngesandla. Izici isicelo futhi ukusebenza